Papawadi » Page4of5» News, Knowledge And Entertainment
ထမင်း ကို လက်နဲ့စားသင့်သလား၊ ဇွန်းခရင်းနဲ့ စားသင့်သလား
တကယ်တော့ ထမင်း ကို လက်နဲ့စားတာ၊ လက်ချောင်း တွေ လျာနဲ့ လျက်တာတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုမိုကိုက်ညီပြီး တချို့နေရာတွေမှာ ပိုလို့တောင် အသုံးတည့်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါ တွေကိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးပေးပါသေးတယ်တဲ့။ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်း ကို လက် နဲ့စားခြင်းဟာ ပိုမိုသင့်တော်ကြောင်း သက်သေပြပေးမယ့် အရာတွေက
ထိုစဉ်မှာ ဦးနှောက် က အစားအစာ ပူလား အေးလား၊ အမာလား အပျော့လားဆိုတာ အာရုံကြောကနေတဆင့် အချက်အလက်တွေ ရရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်အစာချေဖျက်မှု ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။
အလုပ် တစ်ခုခုလုပ်နေရင်း ထမင်းစားသူတွေဟာ ထမင်း စားပွဲ ပေါ်ထမင်း ကိုသာ အာရုံစိုက်စားသူတွေထက် အစားပိုစားမိကြတယ်။ အဲဒီလို လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ စားတော့ နှစ်ဖက်လုံး အလုပ် ရှုပ်နေတဲ့အတွက် တခြားအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လို့ မရတော့ဖြစ်ပြီး ထမင်းစားတဲ့အပေါ်မှာသာ အာရုံစိုက်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လောက်စားခဲ့ပြီးလဲ၊ ဘယ်တော့ နားရမှာလဲဆိုတာ သတိပြုမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိဿရသေ့နှင့် သိကြားမင်းတည်ခဲ့သော ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တည်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း၂၅၀၀
ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဟုစစ်ကဲတော်မင်းမောင်ရွှေနော်ရေး မွန်ရာဇဝင်အရ သိရသည်။ကျိုက်ထီရိုးစေတီသည် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ အရှေ့ရိုးမ တောင်တန်းအပါအဝင် ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ပြင်အထက် ပေပေါင်း ၃၆၀၀ ခန့်မြင့်သည်။
ကြီးမား၍ မတ်စောက်သော ကျောက်တောင်တစ်ခု၏ အစွန်းတွင် ကျောက်လုံးကြီးတစ်လုံး ပြုတ်ကျလုနီး ပါးတင်နေသည်။ ကျောက်လုံးကြီသည် လုံးပတ်ပေ၅၀ခန့်ရှိသည်။ ကျောက်လုံးတော်ကြီး ထိစပ်တင်ရှိ
နေသော ကျောက်တောင် စွန်းအကျယ်အဝန်းသည် ၁၅ ပေထက်ပင်မပိုနိုင်ချေ။နှမ်းပတ်ကျောက်အမျိုးအစား
ကျောက်လုံးကြီးသည် စေတီတော် အပါအဝင် တန်ချိန် ၆၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ကျောက်လုံးပေါ်တွင် စေတီတစ်ဆူတည်ထားသည်။ ဉာဏ်တော် ၁၅ ပေခန့်မြင့်သည်။ ကင်ပွန်း(ကင်မွန်း) စခန်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်ထိ ၇ မိုင်ခွဲခန့်ဝေးသည်။ စခန်းပေါင်း ၂၇ ခုကိုဖြတ်သန်းသွားရသည်။ မွန်ဘာသာ ” ကျိုက်က္ကသိယို” (ရသေ့ရွက်သောဘုရား) မှ ကျိုက်ထီးရိုးဟုစကားရွေ့လျောလာသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၂၃ ခုနှစိ(ဘကြီးတော်ဘုရား လက်ထက် ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲမဖြစ်ပွားမီ (တစ်နှစ်မျှ အလို) တွင်စစ်တောင်းမြို့ဝန် မင်လှသင်္ခသူသည် ပျောက်ဆုံးနေသော ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို ပြန်လည်
တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျောက်လုံးကြီးပေါ်မှ စေတီဉာဏ်တော်မှာ သုံးတောင်မျှသာမြင့်သည်ဟုဆိုသည်။ ဆင်ပစ်ရန် တေလည်ထွက်ရင်း စစ်တောင်း မြို့ဝန်တွေ့ရှိခဲ့သော ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်ကို ပြန်လည်
တွေ့ရှိသည့်နှစ်မှာပင် စေတီတော်လေးကို ငုံလျက် ဉာဏ်တော် ၁၂ တောင်ရှိစေတီသစ်ကိုတည် ခဲ့လေ သည်။ စစ်တောင်းမြို့မှ စေတီအရောက် လမ်းဖောက်ခဲ့သည်။နှစ်စဉ် နတ်တော်လရောက်တိုင်း ပွဲတော် ကျင်းပလာခဲ့သည်။
ကိစ္စတွေအားလုံး ထားလိုက်ပါ ဆရာမ။ သား . အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်သလို အားလုံးကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ နာမည် ချဉ်ဖတ်။
စာဖတ်ပျင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း အချိန် ခဏလောက်ပေးပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။စိတ်ထဲ တစ်ခုခုတော့ ကျန်ခဲ့စေမှာပါ။)
ကျောင်းသားလေးတွေပြေးနေကြတဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲလေး တစ်ခု။ ဆရာ၊ဆရာမတွေ၊ အတန်းဖော် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေနဲ့ ကလေးတွေ ပြေးနေကြတယ်။ ပန်း ဝင်ခါနီးပြီ။
ထိပ်ဆုံးမှာပြေးနေတာ နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ယောက်က အတန်းထဲမှာ နာမည်ကြီး စာအတော်ဆုံး၊ ဆရာမတွေ အချစ်ဆုံး မောင်ထိန်ဝင်း။ သူ့ဘေးမှာ ကပ်ပြေးနေတာကတော့ ကျောင်းချဉ်ဖတ်၊ ထပ်ရှင်းအောင်ပြောရရင် စာမတော်ဘူး၊ ဆရာမတွေ အမြင်ကပ်ကြတယ်။
ခိုင်းရင် လုပ်ချင်မှ လုပ်တတ်လို့လေ။ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အရမ်းချစ်ကြတယ်။သူ့နာမည်က မောင်ကြည်လင် ။နာမည်နဲ့လူနဲ့က သိပ်မကိုက် အသားက ခပ်ညိုညို … … မျက်နှာလေးထောင့်နဲ့ ၊ထူးခြားတာက အမြဲပြုံးနေတတ်သူ။သို့သော် … … ပြဿနာကောင်လေး။နာမည်ရင်းပင် ပျောက်နေပြီ … … ချဉ်ဖတ်တဲ့ ။
ပရိသတ်ထဲမှာ အသံ အထွက်ဆုံးက –“ထိန်ဝင်းကွ ….. ပြေးကွ ….. မင်းနိုင်ရမယ်ကွ”ကျောင်းသားလေး တစ်သိုက်ကတော့ –“ချဉ်ဖတ် ပြေးထားကွ … ဒီကောင့်ကို အနိုင်ယူပြလိုက် စမ်းကွ”
ထိုစဉ်မှာပင် မောင်ထိန်ဝင်း ခြေခေါက်ပြီး တလိမ့်ခေါက်ကွေး ပစ်ကျသွားကာ ဂျွမ်းတွေပင် လေး,ငါးပတ်လောက် ထိုးသွားတယ် ထင်ရတယ်။ ပြိုင်ဘက်~မရှိ တစ်ဦးတည်း~ပန်းဝင်ဖို့ ချဉ်ဖတ် အခွင့်အရေး ရလိုက်ပါတယ်။ ကြိမ်းသေကို ရနေပြီ။
အားပေးနေတဲ့ ကျောင်းသား-ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဆရာ-ဆရာမတွေထံမှ “ဟာ”ဆို တဲ့ အသံကြီးကို အလွန်ပင် ကျယ်လောင်စွာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။သူူတို့တွေ ထိန်ဝင်းကိုသာနိုင်စေချင်စိတ်ကြီးစိုးနေချိန် မထင်မှတ်ပဲ အရှုံးနဲ့တွေ့ရမည်ကို အလွန်ပင်နှမြော၍ထွက်လာသောအသံ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒီအသံ က ပိုကျယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်သူမှ မထင်မှတ် ထားတဲ့ အပြုအမူ၊ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရ၍ဖြစ် ပါတယ်။ပစ်လဲကျသွားသော မောင်ထိန်ဝင်းကို ချဉ်ဖတ် က ဆွဲပွေ့လိုက်လို့ပါပဲ။ အားလုံး စိတ်ထင် ချဉ်ဖတ်တော့ပျော်ပြီး ပန်းဝင်လိုက်ပြီ ထင်နေကြတာပါ။ပန်းဝင်ဖို့ကလည်း ကိုက် ၁၀၀ သာသာ ကျန်တော့သည်ပေါ့။
မောင်ထိန်ဝင်းကို ဆွဲပွေ့လာပြီး ပြိုင်ပွဲအပြင်ကို ထွက်လာတာ ကျောင်းရဲ့ မကောင်းသတင်း နာမည်ကြီး ချဉ်ဖတ် ဖြစ်နေသည်ကိုက အားလုံးအတွက် အထူးအဆန်းပမာ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
“ဟိုကောင်တွေ လာကြလေကွာ၊ မြန်မြန်လာကွ ဒီကောင့် ကို ဆေးခန်းပို့မှ ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်”
ပရိသတ်ကြားမှ အခန်းဖော်တွေ၊ ချဉ်ဖတ် သူငယ်ချင်းတွေ ပြေးထွက်လာကြပြီး ညည်းညူနေသော မောင်ထိန်ဝင်းကို ဆေးခန်းပို့ရန် ဝိုင်း၍သယ်ပိုးကာ ထွက်သွားကြတယ်။
ထိုကြားထဲ ပြေးလိုက်သွားတာကတော့ အလွန်ပင် စိုးရိမ်သောမျက်နှာနဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းအလံတိုင်အောက်က အုတ်ခုံလေးမှာ ထိုင်ကျန်ခဲ့တာကတော့ ချဉ်ဖတ်ပါပဲ ။ဆေးခန်းကို လိုက်~မသွားခဲ့ပါဘူး။မောနေသော်လည်း ခပ်အေးအေးပုံစံနဲ့ အလံတိုင်ကို မှီပြီး ရေအိုးစင်က ခပ်လာတဲ့ရေကို စိမ်ပြေ နပြေ မော့သောက်နေပါတယ်။
“ချဉ်ဖတ် လာ ထိုင်လေကွာ ”
“မင်းတို့ရော ဆေးခန်းလိုက် မသွားဘူးလား”
“ထားလိုက် စမ်းပါကွာ၊ မသေနိုင်ပါဘူးကွာ။ဒါနဲ့ မင်း ဘာကြောင့် ပန်း မဝင်လိုက်တာလဲ။ အခုတော့ မင်းတို့နောက်က ငပုကောင် ပထမ ရသွားတယ်ကွ။ မင်းပဲ ပထမဆုရတဲ့ လွယ်အိတ်လေး လိုချင်တယ်ဆို”ချဉ်ဖတ် ဘာမှမပြော ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ နေနေတယ်။
ထိုစဉ် သူတို့အနားကို PT ဆရာ ဦးညိမ်း ရောက်လာပါတယ်။
အနားသို့ ဆရာရောက်လာသဖြင့် အတင်းကုန်းထပြီး မတ်တတ်ရပ်လိုက်ကြပါတယ်။
“မင်းလိုကောင်မျိုးမှာ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတာ ငါရော၊ အားလုံးရော အတော် အံ့သြသွားတယ်ကွ။မင်းကောင်တော့ ခြေဆစ်ခေါက်သွားလို့ မထနိုင်တော့ဘူး တဲ့။ ဒါနဲ့ မင်းက ပန်းဝင်ခါနီး
ဘာလို့ ပန်းမဝင်ပဲ ထိန်ဝင်းကို သွားပွေ့ရတာလဲ ”
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ၊ အဖေက ပြောဖူးတယ် အနိုင်ဆိုတာ တကယ်တော့ အလွယ်ဆုံး ရယူနိုင်တယ် တဲ့။ အရှုံးဆိုတာကိုသာ လူတွေ အလွယ် မရနိုင်တာတဲ့။ ကျွန်တော်က ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ပန်းဝင်ခါနီးရင် အလျော့ပေးပြီး ဒီကောင့်ကိုပဲ အနိုင်ပေးလိုက်မှာပါ ဆရာ။ဒီကောင်က အတန်းထဲမှာလည်း စာအတော်ဆုံး၊စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာလည်း အမြဲတမ်း ပထမ၊
ဒီလိုလူဆီမှာ အရှုံဆိုတာကို လက်ခံနိုင်အား မရှိနိုင်ဘူး လို့ထင်တယ် ဆရာ။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်လိုကောင် နိုင်ရင်လည်း မကောင်းပြန်ဘူး။ထိန်ဝင်းနိုင်ဖို့ကို အားပေးနေတဲ့၊ မျှော်လင့်နေတဲ့ သူတွေကို စိတ်ပျက်သွားစေမှာပေါ့။အဖေက ပြောတယ်။လောကမှာ သူများကို ကျေနပ်စေတာ၊ ပျော်ရွှင်စေတာကောင်းတဲ့ အလုပ်၊ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် တဲ့။
တကယ်တော့ ဆရာရယ် ….. ကျွန်တော်က အမြဲ ရှုံးနေကျပါ။ သူများတွေ အမြင်မှာ ကျရှုံးနေတာကိုက
သူတို့ းအတွက် ကျေနပ်စရာဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့ဒါကိုက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အနိုင်ပါပဲဆရာ ”
ဆရာရှေ့မှ ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ထွက်သွားသော ချဉ်ဖတ် ခေါ် ကြည်လင်ရဲ့နောက်ကျောကို ဆရာလုပ်သူမှာ ကြည့်နေရင်း (၈)တန်းအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားတွေကို
ဘယ်လို နားလည်ရမှန်း မသိ … အံ့သြစွာ ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလို စကားတွေကို ဆရာဖြစ်သူ မကြားဖူးပါ။
ဒီလို ကလေးမျိုးမှာ ဒီလောက်မြင့်တဲ့ အတွေးအခေါ် ရှိနေတာ ပိုလို့ပင် အံ့သြစရာ တစ်ခုပါ။အခြား ဆရာတွေကို ဒီစကားတွေ ပြန်ပြောပြရင် ယုံကြပါ့မလား။အတွေးတွေ များစွာဖြင့် ရပ်နေရင်း ……………
မောင်ထိန်ဝင်း ကျောင်းပြန်တက်တဲ့နေပေါ့။ အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရသွားတဲ့ ငပုလို့နာမည်ပြောင်ခေါ်တဲ့ ကျော်စိန်လည်း လွယ်အိတ် တကားကားနဲ့ကျောင်းတက် လာတဲ့နေပေါ့။
အချိန်က အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့် အချိန် –
“သားလေး သက်သာလား။ လမ်းကို ဖြေးဖြေးလျှောက်နော်။အတက်/အဆင်း သတိထား သိလား”
အချစ်တော် မောင်ထိန်ဝင်းကို ကရုဏာအပြည့်နဲ့ နိဒါန်းတွေ ခြွေနေတာပါ။
အသံကြောင့် ကျောင်းသားတွေ အခန်းပေါက်ဝကို လှမ်းကြည့်မိကြသည်။ အပေါက်ဝတွင် ရပ်၍ ဝင်ခွင့်တောင်းနေတာကတော့ ချဉ်ဖတ်ပါပဲ။
“ဟို အကောင် ဟင်….. ဒီနေ့ရော နောက်ကျနေပြန်ပြီလား။ မင်းကတော့ အတော်လွန်တာပဲ။ ဘာစည်းကမ်းမှလည်း မသိ၊မလိုက်နာ။ နင့်လိုကောင်က ကျောင်းတက်နေဖို့ မကောင်းဘူး။
သွား ….. ဝင်၊ သွားထိုင်”
ကပို့ကရို့နဲ့ ချဉ်ဖတ် နောက်ဆုံးအတန်းကို အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ချွေးတွေရွှဲနေသော ချဉ်ဖတ်မှာပုဆိုးစကို ယူပြီး မျက်နှာကို သုတ်လိုက်ပါတယ်။
“မင်း ဘာဖြစ်လို့ နောက်ကျနေတာလဲ”
ထိုစဉ် အခန်းထဲကို ကျောင်းစောင့် ကိုပေါက်ကြီး ပြေးဝင်လာပြီး
“ဆရာမ … ဆရာမ
ဆရာမအိမ် ခုနက မီးလန့်လို့ တဲ့”
“ဟင် ….. ဟုတ်လား …
ထိုင်ရာမှ ထလာပြီး အလွန်ပင် သောကရောက်သွားသော ပုံစံဖြစ်နေသော ဆရာမကို ကျောင်းသား~ကျောင်းသူတွေ ဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်။
“ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့ ဆရာမ၊ မီးက ဘာမှ မလောင်သွားပါဘူး။ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်တွေ့ပြီး အတင်းဝင်သတ်သွားလို့ မီးငြိမ်းသွားတယ်တဲ့။ ခုပဲ … … ဆရာမတူလေး လာပြောသွားလို့ ကျွန်တော် လာပြောတာပါ”
ကျောင်းစောင့် ကိုပေါက်ကြီး ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ ဆရာမလည်း အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးခုမှ သောကအေးသွားသော မျက်နှာလေးနဲ့ သက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။
“ကဲ … ကဲ … အိမ်စာတွေ လာတင်ကြ။ မတင်တဲ့သူ မပြီးတဲ့သူ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ထွက်လာခဲ့နော်။ရှေ့မှာ လက်လာမြှောက်ထား”
ရှေ့ဆုံးမှ ထွက်လာသူက ချဉ်ဖတ်ပါ။ဆရာမလည်း ချဉ်ဖတ်ကို မြင်လိုက်တဲ့အခါအိမ်စာ မလုပ်လာရမလားလို့ ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။
“ဟဲ့ … ကြည်လင် ! နင် အိမ်စာ မလုပ်ခဲ့ပြန်ဘူးလား ”
” ဒီ တစ်ခါတော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဆရာမ။ဒါပေမယ့် စာအုပ် ဘယ်မှာ ကျကျန်ခဲ့လည်း မသိဘူး။မတွေ့တော့လို့ လာ~အပြစ်ခံတာပါ”
“နင်ဟာလေ … ငါ့တောင် လာလိမ်နေတယ်ပေါ့။ လာခဲ့ ။နင့်လိုကောင်ကို အရည်ဆုတ်ပစ်မှ ရမယ်”ခုံပေါ်မှ ကြိမ်လုံးကို လှမ်းယူပြီး ရိုက်ရန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
“ခဏ … ဆရာမ … ခဏ ၊ ရိုက်တာတော့ ရိုက်ပါ ဆရာမ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မလိမ်ပါဘူး။အိမ်စာ တကယ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်လည်း တကယ် ပျောက်သွားတာပါ။
အဖေက ပြောဖူးတယ်..အပြစ်ဆိုတာ ရှိရင်တော့ ခံရမယ်။အပြစ်သက်သာအောင်တော့ ဘယ်တော့မှ မလိမ်ရဘူးတဲ့။အဲဒါ ယောကျ်ားကောင်းတို့ရဲ့ အလုပ်~မဟုတ်ဘူး တဲ့ ဆရာမ”
“ဒီကောင်ကတော့ ….ကဲဟယ် … ကဲဟယ် …ကဲဟယ်…ကဲဟယ်…ကဲဟယ် ”
ကြိမ်ငါးချက်ကို အပြုံးမပျက်ပဲ ချဉ်ဖတ်ခံယူလိုက်ပါတယ်။အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် လက် မမြှောက်ရတော့ပဲပြန်ဝင်ထိုင်ရပါတယ်။ချဉ်ဖတ်ရဲ့ထူးခြားချက်မှာ အပြုံး မပျက်ခြင်းပဲ။
ညနေ ကျောင်းဆင်းပါပြီ။ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်လည်း မနက်က ကြားထားတဲ့ ကိစ္စကြောင့်အိမ်ကို အမြန်ပြန် လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ထိုင်နေတဲ့မိခင်ကြီးကို ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ မေးပါတော့တယ်။
ဆရာမတို့ အိမ်ဟာ လမ်းမဘေးမှာ ရှိနေတာပါ။ခြံစည်းရိုးနဲ့လည်း အိမ်ဟာ သိပ်မလှမ်းပါဘူး။ဖြစ်ပုံကို မိခင်ကြီး ရှင်းပြသည်ကတော့ –
“သမီးရယ် အမေက ဘုရားမီး ပူဇော်ပြီးနောက်ဖေးမှာ ဟင်းအိုး သွားကြည့်တာ။အဲ့ဒါ ဘုရားမီးက ပြုတ်ကျပြီး အောက်က ဘုရားရှိခိုးရင် ထိုင်တဲ့ပိတ်စ အခင်းပေါ်ကျပြီး မီး ထလောင်တာပါပဲ သမီးရယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ လမ်းကဖြတ်သွားတဲ့ ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ကလှမ်းတွေ့လို့ အတင်းတက်လာပြီး သူ့လွယ်အိတ်လေးနဲ့ မီးကိုရိုက်သတ်တာပေါ့။ မီးက မငြိမ်းတော့ အနီးက သောက်ရေအိုးကို မ,ပြီး ငြှိမ်းလိုက်တယ်လေ။
အမေလည်း ကြောက်ပြီး ကြောင်ကြည့်နေမိတာပေါ့။အဲ့ဒီကလေးက မီးလည်းငြိမ်းရော သားကျောင်းနောက်ကျနေလို့ခွင့်ပြုပါဦး ဆိုပြီး ဆင်းပြေးသွားပါလေရော။သူသာ မလာခဲ့ရင် အခု အိမ်တောင် ကျန်မယ်~မထင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ဘုရားစင်နားက ဘီဒိုအောက်မှာ သူ့စာအုပ်လေးတောင် လွင့်ကျ ကျန်ခဲ့သေးတယ် သမီးရဲ့ ”
အမေဖြစ်သူက ရှေ့စားပွဲပေါ်မှ ခပ်နွမ်းနွမ်း စာအုပ်လေးကို ယူ၍သမီး~ဆရာမကို လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာမလည်း လှမ်းယူပြီး အဖုံးပေါ်မှ နာမည်ကိုကြည့်လိုက်မိသောအခါ ရင်ထဲမှာ
မီးတွေ တောက်လောင်သွားသလားတောင် ထင်မိလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်အဖုံးပေါ် ရေးထားတာက မောင်ကြည်လင် ROOM – C Grade – 9
ဆရာမလည်း စာအုပ်ကို အတင်းကာရော လှန်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။မျက်ရည်တွေ လိမ့်ကျလာပါရောလား။နောက်ဆုံး စာမျက်နှာမှာသူမ အိမ်စာအဖြစ်~ပေးလိုက်သော Essay အားသေသပ်စွာ ရေးထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ပြကွက်လို မျက်စိထဲမှာ ပြန်လည်မြင်လာမိပါတယ်။သူ အမှန်တွေပြောခဲ့သော်လည်း မယုံခဲ့မိဘူး။ဒေါသကြောင့် အားပြင်းပြင်းနဲ့ ရိုက်ခဲ့မိတဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ငါးချက်ကို တွေးမိပြီး မျက်ရည်တွေ ပိုကျလာမိတယ်။
သူ့ အခန်းထဲရောက်လာတဲ့ ကာလတစ်ခုလုံးတစ်ခါမှ မျက်နှာသာ မပေးမိဖူးသော ကျောင်းသားလေး၊စကားကြီး၊ စကားကျယ်တွေကို အမြဲပြောတတ်လို့အမြင်ကပ်မိသော ကျောင်းသားလေး၊
အမြဲပြုံးနေတာကို ရိသလို လုပ်နေတယ်၊ပြောင်စပ်စပ် လုပ်နေတယ် ထင်မိပြီး မျက်မုန်းကျိုးခဲ့မိသော ကျောင်းသားလေး။
တကယ်တော့ ..တကယ့် လူတော်လေးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆု အလွယ်လေးရယူနိုင်သော်လည်း ပန်းမဝင်ပဲ သူငယ်ချင်းကို ပြေးကူခဲ့တယ်။ခုလဲ ကျောင်းမှာပြောပြရင် ရရဲ့သားနဲ့ နေရာ မယူဘူး။ နာမည်ကောင်း မယူခဲ့ဘူး။ကျောင်းအလုပ်တွေ ခိုင်းသမျှလည်း တစ်ခါမှ မငြိုငြင်ခဲ့ဖူးဘူး။
နောက်တစ်ရက် မနက်ခင်း …ကျောင်းခေါင်းလောင်းသံကြောင့် ကျောင်းသားတွေ အတန်းတွေထဲကို ဝင်ပြီး နေရာယူကြပါတယ်။ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့် ဒီနေ့ကျောင်းကို ခပ်စောစော ရောက်လာပြီး အခန်းထဲကိုလည်း ခပ်စောစောလာခဲ့မိတယ်။စိတ်စောနေမိတယ်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အလွန်တွေ့ချင်နေမိပြီး ကျောင်းသားတွေကို ခဏခဏ လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။
သူရှာနေတဲ့ချဉ်ဖတ် ကျောင်းကို ရောက်,မလာသေးပါ။ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်း ထိုးပြီး၍ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆို၊ဘုရားရှိခိုးပြီးသည်အထိ ကြည်လင် (ချဉ်ဖတ်)ရောက်,မလာသေးပါဘူး။
စာသင်ဖို့ပင် စတင်နိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆရာမတစ်ယောက်ကြည်လင်ကို မျှော်နေမိ၍ စာမသင်ဖြစ်သေးပါ။
ဖိနပ်သံကြားလိုက်ရပါတယ်။ ပြေးလာနေတဲ့ အသံတစ်ခု။
“ဆရာမ … ဝင်ခွင့်ပြုပါ”
အခန်းဝမှ ဝင်ခွင့်တောင်းသံကြောင့် လှမ်းကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါ –
ဆရာမ ထိုင်နေရာမှ အတင်း ထပြေးသွားမိသည်။ ကျောင်းသားတွေလည်း “ဟာ” ခနဲဖြစ်၍မတ်တတ်တွေ ထရပ်ကုန်ကြတယ်။ အခန်းဝတွင် ခေါင်းမှာ ပတ်တီးအဖွေးသားနှင့် ပြုံးနေသော မောင်ကြည်လင်။
ဒါမှမဟုတ် အများ အခေါ် ချဉ်ဖတ်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ ဖြစ်သည်။
ဆရာမရဲ့ ကရုဏာသက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကို တွေ့သော်လည်း မအံ့သြပဲ ခပ်ပြုံးပြုံးပင် နေနေပါတယ်။
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဆရာမ။ ခေါင်းနည်းနည်း ပေါက်သွားတာပါ။မနက်က အစောကြီး အမေ့ကို ဈေးထကူပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပေးနေတာဘယ်ကလာတဲ့ ခဲလည်း မသိပါဘူး ဆရာမရယ် ၊
အဲ့ဒါ လာမှန်ပြီး ခေါင်းပေါက်သွားလို့ပါ”
“သားရယ် … ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။မင်းလို စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကိုတောင် ခဲနဲ့ ချောင်းပစ်တဲ့သူ ရှိတယ်တဲ့လား”
ထိန်ဝင်းခေါ်သံကြောင့် ကျောင်းသားတွေရဲ့ မျက်လုံးအကြည့်တွေ သူ့ဆီ ရောက်သွားကြပါတယ်။ ထိန်ဝင်းမှာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။
“ဆရာမ…..ချဉ်ဖတ် ကိုလေးခွနဲ့ ချောင်းပစ်တာ သားပါ”
အားလုံး အလွန်ပင် အံ့သြ မှင်သက်သွားကြပါတယ်။
ထိုအခါ ချဉ်ဖတ် က –
“သူငယ်ချင်း ထားလိုက်ပါကွာ။မင်း မပြောပြလည်း ငါသိပြီးသားတွေပါ။ ထားလိုက်စမ်းပါ။မေ့သာ ထားလိုက်စမ်းပါ။ငါ ဘယ်သူ့မှ အပြစ်မတင်ပါဘူးကွာ။ငါ့မှာ ခံသင့်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စရှိလို့သာ ခံရတာပါကွာ။မင်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ထိသွားတာလည်း နည်းနည်းပါကွာ။ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ မင်း ဘာမှ ဆက်ပြောမနေနဲ့တော့။ထိုင်ပါကွာ ”
အားလုံး ပိုလို့ အံ့သြသွားကြပါတယ်။ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ နောက်ဆုံးတန်းကို လှမ်းဝင်သွားသောလူထူးဆန်း ချဉ်ဖတ်ကို ဝိုင်းကြည့်နေမိကြတယ်။
ကိုယ့်ကို ခေါင်းပေါက်အောင် လေးခွနဲ့ ချောင်းပစ်ခံရတာတောင် ခပ်အေးအေးပုံစံနဲ့၊ အပြစ်လုပ်သူကိုတောင် အပြစ်မမြင်ပါလား။
ဆရာမရဲ့ ဒေါသသံ စွက်ဖက်နေသောခေါ်သံကြောင့် ထိန်ဝင်းလန့်သွားကာ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်ပါတယ်။
“မင်းက ဘာဖြစ်လို့ မောင်ကြည်လင်ကို လေးခွနဲ့ ချောင်းပစ်ရတာလဲ။ မင်းကွာ…မတော်လို့ မျက်လုံးမှန်သွားရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ။ ဟိုက ရဲသွားတိုင်ရင်လည်း နင် အဖမ်းခံရမှာ သိရဲ့လား ”
“ဟုတ် ..! သား မှားသွားပါတယ်။ပြေးပွဲနေ့က သူဝင်တိုက်လိုက်လို့ လဲကျသွားတယ် ထင်ပြီးလေးခွနဲ့ ချောင်းပစ်မိတာပါ ဆရာမ”
“သူသာ အကျင့်မကောင်းရင် နင် လဲသွားတော့ပထမရအောင် ပန်းဝင်ယူမှာပေါ့။ခုတော့ သူ့ကြောင့် နင် ဆေးခန်းကို မြန်မြန်ရောက်ရတာလေ”
“ဆရာမ …..သားကို စကားပြောခွင့် နည်းနည်းလောက် ပေးပါလား”နောက်တန်းမှ ချဉ်ဖတ်ထ၍ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူ့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့တော့ ဆရာမ။တကယ်က သား~အပြစ်တွေပါ။ကိုယ့်ကို အမြင် မကြည်ဖြစ်နေတဲ့သူကို အမြင်ကြည်အောင်ပြောတာနဲ့ မရနိုင်ဘူးတဲ့။အချိန်အခါနဲ့ အလုပ်ကပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ် တဲ့။ဒါကြောင့် ဘာမှ မရှင်းပြမိတာ သား~အပြစ်တွေပါ။
ပြီးတော့ ကိစ္စတစ်ခုကို ပြီးသွားတဲ့အခါ ပြီးတဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာသာ ဝင်မယူရဘူးတဲ့။ကိုယ့်ကောင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြောပြီးမျက်နှာသာရအောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်မိစေနဲ့တဲ့။
ဒါကြောင့် ကိစ္စတွေအားလုံး ထားလိုက်ပါ ဆရာမ။သား . အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်သလိုအားလုံးကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ”
All credit goes to the original writer. Photo – Credit to original up-loader
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ ဩဂုတ်လ ၂၀ မှ ၂၆)
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာမယ်။ သတင်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ကောင်းတွေ ရောက်လာမယ်။ ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ ရပ်ဝေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အလုပ်တွေ ပိုပြီးအောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးကလည်း ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ အနီးကပ်မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ လူရင်းထဲက ပြဿနာကြီးကြုံ တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေ အခက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားကလည်း ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ အထင်လွဲခံရတာတွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ဆရာသမား ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မှာလည်း ထင်ထင်ရှားရှား အောင်မြင်မယ်။ အခွင့်အလန်းကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ငွေရေးကြေးရေး ရှုပ်ထွေးတာ၊ စာရင်းဇယားမှားယွင်းတာ၊ အလိမ်ခံရတာ၊ ယာဉ်တွေ၊ စက် တွေနဲ့ ထိမိုက်မိတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကြုံတတ်တယ်။အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အတော့်ကိုသတိထားရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ မိမိရဲ့ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ နို့ထမင်းကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကြုံတာ၊ အပန်းဖြေခရီးလိုမျိုးသွားရတာ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတာ၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ် သတင်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ကောင်း ရောက်လာတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီကောင်းတွေ ပေးလာမယ်။ လုပ်ငန်းတွေ သိသိသာသာ အောင်မြင်တာ၊ စီးပွားသိသိသာသာတက်တာမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်လည်း ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမယ်။ မိဘဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေအတွက် ဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံရ၊ ကြားရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အောင်မြင်မယ်။ ထီပေါက်သလိုမျိုး ငွေတွေ ဝေါကနဲ ဝင်လာကိန်းရှိတယ်။ ဆုံးရှုံးမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာတတ်တယ်။နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေကတော့ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြောင့်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ လိမ့်ကျ၊ ချော်လဲတာ၊ ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေ လည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အနှောက်အယှက်ကြီးကြီးမားမား ကြုံမယ်။ ရပ်ဝေးကလူတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ပဲမုန့်ကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကိုယ်လုပ်သမျှကို ကန့်ကွက်နှောက်ယှက်မယ့်သူတွေနဲ့ပဲ ကြုံနေရတတ်တယ်။ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေ ပျက်သွားတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင် မကောင်းမြင် အထင်လွဲတာတောင် ခံရတတ်ပါတယ်။ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ဝယ်တဲ့ရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်း ထစ်ငေါ့လွဲချော်နေတတ်တယ်။ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေမှာ ဆန္ဒမစောသင့်ပါဘူး။ အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ ကြုံမယ်။ သူခိုးခိုးခံရတတ်တယ်။ ရေတွင်းရေကန်ကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ခရီးကိစ္စအတွက်လည်း စိတ်ညစ်စရာကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အထူးသတိထားရမယ့်အချိန်ပါပဲ။ လမ်းခွဲရမတတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စတွေကတော့ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ ကူညီဆောင်မမှုတွေနဲ့လည်း ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲကြားကပဲ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ အုန်း ၆ ညွန့်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ ခရီးသွားရတတ်ပါတယ်။ ပြည်ပခရီးစီစဉ်နေသူများလည်း အဆင်ပြေသွားမယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ခရီးသွားရတတ်တယ်။ လူနာ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီးပတ်သက်ရတတ်တယ်။ အလုပ်အခြေအနေ နေရာထိုင်ခင်း ကောင်းသောပြင်ဆင်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းတွေ ကြုံမယ်။ ငွေကိစ္စတွေ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်မယ်။ သေချာပေါက်ရမယ့်ငွေတွေ လွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ရုံး၊ ဂါတ်မှာ စကားပြောရတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတစ်ပါးကိစ္စ လိုက်လံကူညီရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ရွက်လှ ၁၇ ညွန့်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ခရီးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သွားဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူများ အထမြောက်အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးက ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးဆရာသမား ကြီးကဲသူတွေက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းနှစ်မျိုး ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ ကျန်းမာရေးညံ့မယ်။ စိတ်ညစ်ရာဧည့်သည် ရောက်လာတတ် တယ်။ ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေနဲ့ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အလွန်စိတ်ရှုပ်ရမယ်။ ရောဂါဟောင်း ပြဿနာဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေနဲ့လည်း စိတ်သဘောကွဲရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံလာမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ နေရာက ငွေတွေအများကြီး ဝင်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်ရတာ ပြဿနာဖြစ်တာတွေကြုံမယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မွှေးသောပန်း ၉ ပွင့်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ ဆက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကင်းအောင်နေနေ ပြဿနာတွေက လာပြီး ပတ်သက်နေတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာလည်း တစ်ယောက်တစ် ပေါက်ဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ ပြီးသွားပြီလို့ထင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ စိတ်ကုန် စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အလုပ်ပြောင်းချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အင်မတန်ရင်းနှီးသူထဲက နာရေး ကြုံလိမ့်မယ်။ နေရာကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေ အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ မိခင်၊ အဒေါ် စသူတွေ ကျန်းမာရေး ညံ့မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ် နေတဲ့လူတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖြစ်တာ၊ ပညာကောင်းရတာတွေ ကြုံလာမယ်။ ဆရာသမား၊ ကြီးကဲသူများလက်မှာ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်တယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၉။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့်လှူပါလေ။
Credit : Red Dot Network